ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ - Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည်သတင်းအတုအတုတစ်ခုဖြစ်သော Martin Vrijland
ရင်းမြစ် - fullyconnected.nl
The Covid-19 Janet Ossebeard (သီးနှံစက်ဝိုင်း, Ninefornewscoronavirus မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) သည်ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ IBM Deep Blue စူပါကွန်ပျူတာဆိုတာသတိထားရမယ် အဖြစ်အစောပိုင်း 1996 အဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံစစ်တုရင်နှင့် Kasphov နှင့် Google Alphabet's Quantum Computer တို့မှရှုပ်ထွေးဆုံးဂိမ်း၏ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Go ကိုရိုက်နှက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မီဒီယာသည်မိမိကိုယ်တိုင် (ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီများအပါအ ၀ င်) အရာအားလုံးအပါအဝင်အရာအားလုံးကိုစတင်နိုင်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။
သူတို့ကအရာအားလုံးကိုရုပ်ရှင်လိုအတူတကွစုစည်းနိုင်ပြီး၊ ဒါဟာတကယ်ကိုသတင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်စေနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် NuCheck.nl လိုသတင်းစစ်ဆေးရေးအတုတွေဟာနောက်ပိုင်းအဆင့်မှာလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ကြီးမားသောအချက်အလက်စုဆောင်းမှုအားလုံးနှင့်အတူကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုမိုက်ခရိုပစ်မှတ်ထားသည့်အဆင့်အထိမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိကြသည်။
ဤအရာအားလုံးနှင့်စပ်လျဉ်း။ လိမ္မာပါးနပ်စွာပြောဆိုခြင်းမှာအမှန်တရားအမြောက်အများရှိခြင်းသည်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးထားသောသတင်းအတုများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်လူများသည်သတင်းအတုများရှိကြောင်း“ သက်သေပြခြင်း” ဖြင့်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြင့်ကလေးအားရေဖြင့်ထုတ်ပစ်နိုင်သည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုဤအလေးပေးခြင်းနှင့်ငါ့စာအုပ်ကိုတကယ်ဖတ်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်သင့်အားအကြံပေးချင်ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်ထားသောအတိုက်အခံများ၏နည်းဗျူဟာများကိုသင့်အားပြရန်မည်သူမျှမရှိပါ။ မဟုတ် Ninefornews, မ WantToKnow မဟုတ် Jensen မဟုတ် Niburu, Infowars မဟုတ်။ သူတို့ကနောက်ဆုံးလိုင်းကြောင့်ပါပဲ။ ဒီနေရာမှာဥယျာဉ်မဆောက်ပါနဲ့ In ဤဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်စာအုပ်ထဲတွင်ဤထိန်းချုပ်ထားသောအတိုက်အခံနည်းဗျူဟာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်။
ဒီ post ကနေ metro.co.uk Janet Ossebaard ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုသတင်းအတုအဖြစ်မကြာခင်တံဆိပ်ကပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကြည့်ပါ။
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဟာမိုက်ချင်စိတ်နဲ့စမတ်မဖြစ်ချင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ခုနစ်နှစ်ကျော်ကတည်းကအလုပ်ကနေထွက်ခဲ့ပါတယ်၊ အကြောင်းကတော့မီဒီယာရဲ့လိမ်ညာမှုကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဥပမာအဲဒီအချိန်တုန်းကအဲလက်စ်ဂျုံးစ်ရဲ့ Infowars ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ဆဲနောက်မီဒီယာဆားကစ်တွေမှာပါလာတယ်။ ဒါနဲ့သူတို့ကဒီထူးဆန်းတဲ့ဘဲကိုသူတို့သိပ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုအတွင်းပိုင်းကနေရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့တယ် ရှင်းပြချက်).
ချွန်ထက်သောအထား ရှိ၍ လုံခြုံသောပိုက်ကွန်များနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောအတိုက်အခံသက်တန့်စစ်သည်များအတွက်မကျပါစေနှင့် ငါ့စာအုပ် သို့သော်နောက်ထပ်ရှင်းပြချက်အဘို့ အထူးသဖြင့် ဒီဆက်ဆက်).
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းကျွန်ုပ်အားထောင်ချောက်ဆင်ရန်နှင့်သတင်းအတုအဖြစ်တံဆိပ်ကပ်နိုင်သောမက်ဆေ့ခ်ျများတင်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်ဗွီဒီယိုများစွာကိုကျွန်ုပ်ထံသို့ပေးပို့ခဲ့သည်။ ယူဆရငါ၏အ site ကိုမှောင်မိုက်၌ကြိုးပမ်းမှုအတွက်။ ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့သတိထားစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဝေဖန်မှုဆက်လက်ရှိနေရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်တွင်မှန်ကန်သောအချက်အလက်အရင်းအမြစ် (မူရင်း) ကိုမည်သို့သွားနိုင်ပုံနှင့်ဤဗိုင်းရပ်စ်စနစ်ကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပုံကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
"အတိုက်အခံတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကကိုယ့်ကိုကိုယ် ဦး ဆောင်လမ်းပြခြင်းပဲ"
source link ကို entries တွေကို: destentor.nl, ninefornews.nl, wikipedia.org bbc.com
အဘယ်ကြောင့် Ole Dammegard သည့်အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာတစ်ခုအကြီးအပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါသည်
ကျနော်တို့ 911 ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကျော့ကွင်း၌ဂျော့ခ်ျဗန် Houts တူသောလူများကဖျားယောင်းကြသည်အဘယ်ကြောင့်
မာတင် Vrijland အတိုက်အခံထိန်းချုပ်ထား? အဘယ်သူမျှမ: ကဒါမဟုတ်ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာပါ!
Tags:: အခြားရွေးချယ်စရာ, ရေရေချိုး, ပူးပေါင်းကြံစည်မှု site ကို, ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ, ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ, ထိန်းချုပ်ထား, coronavirus, Covid-19, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, အတု, အထူးပြုလုပ်ထားသော, Janet, အမျိုးအစား, မီဒီယာ, အတုသတင်း, သတင်း, ninefornews, အတိုက်အခံ, နွားမုတ်ဆိတ်မွေး, valcabal.nl, ထောင်ချောက်
23 မှမတ်လ 2020 23: 25
ဥပမာအားဖြင့်၊ Robert Jensen သည်အမှန်တကယ်အတိုက်အခံဖြစ်သည်ဟုသင်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ပါသလား။ သူကဗီဒီယိုကောင်းတွေလုပ်တယ်။ ဘယ်သူ့စတူဒီယိုကိုသူပြသချင်တယ်လို့ထင်သလဲ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် (အထွေထွေဒတ်ခ်ျစာနယ်ဇင်းအေဂျင်စီ) ဂျွန်ဒီ Mol?
နောက်ဆုံးမီးဖိုထဲတွင်နောက်လိုက်များနှင့်အားလုံးပါ ၀ င်သောလုံခြုံစိတ်ချရသောပိုက်ကွန်ကိုဖြိုဖျက်ရန် ၄ င်းတို့သည်အရှုပ်တော်ပုံဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်ကြသည်။
အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှုသည်ကင်မရာနောက်ကွယ်မှယောက်ျားမိန်းမများမှလာသည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကသူတို့ကသင့်ကိုသူတို့စီစဉ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ REAL ပြောင်းလဲမှုသည်သင်ကိုယ်တိုင်စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းမှစတင်သည်။
23 မှမတ်လ 2020 23: 45
လူတွေကိုသူတို့တယ်လီဗေးရှင်းကြည့်နေသလိုမျိုးဘယ်လိုဆက်ဆံကြမလဲ။ နှမ်းလမ်း! ... Pffff ဒီအမှန်တရားရောနှောအနတ္တနှင့်ရပ်တန့်! "The Cabal", "Trump the Savior", "Q" ("မင်းအတွက်ကောင်းတယ်") နှင့်ထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံစိတ်ချရသောကွန်ရက်သီအိုရီမျိုးစသည်တို့ဖြစ်သည်။
Trump ကယ်တင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူး! ထိုအခါဤ '' သီးနှံစက်ဝိုင်း '' Madam အားဖြင့်အမည်ရှိဘဏ္resာရေးပြန်လည်စတင်စနစ်တကျစီစဉ်ထားသည်နှင့်ယခုပါးပျဉ်းထဲမှာ Trump နှင့်အတူသင်၏မျက်စိအောက်မှာပေါ်ထွက်လာသောအရာကိုမှတဆင့်မိတ်ဆက်လျက်ရှိသည်။ `သီးနှံစက်ဝိုင်း Jann Jannet Ossebaard မှမြှင့်တင်သောနည်းပညာရှင်ကွန်မြူနစ် (အာဏာရှင်ဆန်သော)“ ကယ်တင်ခြင်းနိုင်ငံတော်” ဆီသို့ ဦး တည်သည့်လမ်းပြမြေပုံ။ နည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ - နည်းပညာဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အိုင်အယ်အယ် so..big data: တရုတ်ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏ပုံစံ။ တစ် ဦး ကအာဏာရှင်ကွန်မြူနစ်ကြီးတွေအစ်ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်း! ဒါကဒီအမျိုးသမီးမြှင့်တင်ရန်အရာဖြစ်တယ်!
24 မှမတ်လ 2020 00: 20
ဟေး John de Mol: Diewertje Blok သည်ဤလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ဗျူဟာအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
(ရင်းမြစ် - Libelle)
24 မှမတ်လ 2020 00: 35
ကိုးကား (၉:၃၀ မိနစ်) - အကယ်၍ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုလုံး ၀ ပိတ်ဆို့ထားလျှင်အကျင့်ပျက်အစိုးရများအားဖမ်းဆီးရန် Defender9Operation ကိုတပ်ဖြန့်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်။
'သီးနှံစက်ဝိုင်း' မရှိပါ။ ၎င်းသည်လူများအားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်ခြင်းကိုတားဆီးရန်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးထောင်ချခံရခြင်းကိုမပုန်ကန်နိုင်ပါ။
24 မှမတ်လ 2020 01: 15
Shill Micha Kat သည် Q Anon လုံခြုံမှုကွန်ယက်ကိုတူညီစွာအားပေးအားမြှောက်ပြုသည်
24 မှမတ်လ 2020 11: 49
စုစုပေါင်းရူးသွပ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုပြီးပါက၎င်းတို့သည်ချိတ်၊ လိုင်းနှင့်နစ်မြုပ်မှုများကိုပါပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့သတင်းစကားကိုယုံချင်ပါတယ်။
ယူအက်စ်တွင်လည်းဤကဲ့သို့သောသတင်းစကားမျိုးကိုဟောပြောနေသည့်ဤကဲ့သို့သောရူးမိုက်သောလူတစ်ယောက်ရှိသည်။ အဆိုပါ sasquatch ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်, ဂြိုလ်သားငါတို့ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်, Trump ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်, စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။
24 မှမတ်လ 2020 12: 29
ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာစာသားစာသားများစွာ (covid19 အပိုင်း ၃) ။ မှတ်ချက်များနောက်ကွယ်ရှိအကောင့်အချို့ကိုကြည့်ပါ။ အများစုမှာ youtube ဗီဒီယိုများနှင့်စာရင်းသွင်းသူ ၁ ဦး မှ ၂ ဦး အထိရှိသည်။ ထူးဆန်းတဲ့ YouTube အကောင့်တွေဟာအကောင့်အတုတွေနဲ့တူတယ်
24 မှမတ်လ 2020 12: 33
လူမှုမီဒီယာကိုတုန့်ပြန်သောအကောင့်အတုများ၊ အကောင့်အတုများနှင့် AI အစက်အပြောက်များပြည့်နှက်နေသည်။ သင်သည်အဓိကလူမှုမီဒီယာလိုင်းများအားတုန့်ပြန်မှုများကိုအလေးအနက်ထား။ လျစ်လျူရှုခြင်းမပြုနိုင်တော့ပါ။
24 မှမတ်လ 2020 16: 43
« ဘီလ်ဂိတ်စ်သည် 'ကွမ်တန်အစက်များ' သည်သင်၏ Coronavirus ရှိမရှိနှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးခံခြင်းရှိမရှိကိုခြေရာခံသည့်ကြိုးမဲ့ ID ကတ်ပြား '
Coronavirus covid-19 lockdown update: သင်နိုးလာတယ်၊ ပိတ်မိနေပြီဆိုတာသိတဲ့အခါဘာလုပ်နိုင်လဲ။ »